Soosaarayaasha & Shumaca Shumac udgoon - Warshad Shumaca udgoon ee Shiinaha
shumac dhalo galaas badan leh oo dabool leh
Color Midab iyo cabir caado u gaar ah oo daabacan
Bixiyaan adeeg muunad ah
Can Shumacyada dhalaalaya ee midabka jilicsan leh ayaa u oggolaanaya iftiinka ololku inuu shido markuu gubanayo
Laga sameeyay dhogor soy dabiici ah oo leh suuf cudbi ah
Fra Udgoonkeena oo si xirfad leh loogu xoojiyay dhamaan saliidaha lagama maarmaanka ah ee dabiiciga ah
● Waxaan bixinnaa adeegga macaamiisha ODM OEM.
Cabbirka: D6.2CM * H8.1CM
1. Shumacyada is haysta ayaa kugu habboon inaad ku qaadatid meel kasta oo aad tagtid.
2. Abuuritaanka jawiga kor u qaada jawiga iyo nasashada adiga, sidoo kale waxay ka dhigeysaa hadiyadda ugu habboon munaasabad kasta!
3. Fadlan asxaabtaada ama qoyskaaga u sii gurigaaga daaweyn dareenka ah shumackan dabiiciga ah ee udgoon ee udgoon, ku raaxee waqtigaaga tayada leh qoysaska iyo asxaabta.
Cabbirka: D7.2CM * H9.1CM
Shumacyada Hadiyadaha Caanka ah ee Waxyaabaha Udiyaar garowga ah
NOOCYADA CARRUURTA CARRUURTA EE SIYAASADDA AH: gubi 45 ~ 50 saacadood si siman u gubaya qiiq madow la'aan. Udgoon udgoon oo macaan oo guriga u gaar ah, mid gaar ah, nasasho iyo raaxo leh.
Carafku waa mid wacan oo raaxo leh, naqshadduna waa mid quruxsan. Waxaan haynaa liistadayada udugga ah oo aan kuu hayno boqolaal caraf ah oo aad adigu dooran karto.
Cabbirka: L10.3cm * W10.3cm * H12.2cm
Udgoon: Lavender, Vanilla, Strawberry, Rose, iwm
dhalada dhalada ah shumaca udgoon caadada u leh daboolka birta
dhalada dhalada ah shumac udgoon caadadiisu tahay
Midab iyo cabir caadadiisu daabacan tahay
Bixi adeeg muunad ah oo loogu talagalay qurxinta guriga
Cabir: 8.8cm (Balac) * 8.5cm (Dherer)
Waxaan leenahay khibrado hodan ah, tikniyoolajiyad qaan-gaar ah oo ku jirta suuqa shumaca muddo ku dhow 20 sano.
Waxaan bixinaa adeegga macaamiisha ODM OEM.
muraayad yar oo muraayad ah shumac shumis udgoon ah
Shumaca weelka dhalada muuska wuxuu leeyahay midabyo badan, sida casaan / cagaar / buluug / casaan, waxaan aqbalnaa midab caado ah.
Ma aha kuwo sun ah, sidaa darteed sunta ugu sii deyn mayso hawada markay gubanayaan. Wax soyka ah sidoo kale wuxuu leeyahay waqti gubasho oo gaabis ah sidaa darteed urka si tartiib tartiib ah ayaa loo sii daayaa oo heerkulka gubanaya ee qabow si ay u sii dheeraadaan. Waxaan bixinaa laba nooc oo ah dhameystirka shumaca udgoon, oo ay ku jiraan muraayad dhalaalaysa iyo muraayad qabow. Haddii aad kaliya rabto shumaca weelka, waxaan sidoo kale kuu fidin karnaa.
Cabir: 7.2cm (Width) * 6.3m (Dherer)
Udgoon: Lavender 、 Rose 、 Ocean 、 Tufaax, iwm.
Muraayad Matte ah oo daabacan shumacyo shumacyo soy leh oo leh daboolka bamboo
Cabbirka: D8.2CM * H9.8CM
waxaan rajeyneynaa in aan noqono kanaga mustaqbalka fog ee Shiinaha.
Xariir daabacan astaan ​​caado ah
1. Shumacyadan urta leh waxay leeyihiin dhowr midab oo kala duwan oo jilicsan. Mid kastaaba wuxuu leeyahay udgoon u gaar ah oo nafis leh. Iyaga kula raaxee qof gaar ah.
2. Wax sun ah, gubasho nadiif ah, 100% suufka suufka, shumaca xayeysiinta. Qiiq la'aan, kaarboon yar
3. Waxyaabaha soyka dabiiciga ah, waxay kuu keenayaan caraf dabiici ah. Nadiifi gubashada iyo dabiiciga.
4. Shumacyadayaga soodhaha leh ee soodhaha leh waxaa laga sameeyaa 100% soy wax dabiici ah Lead Free, Soot less,. Majiro waajibaad ka-hortagid daadinta iyo udugga oo dhan ayaa si khaas ah loogu dhex daray wax soy wax uraya si ay u urin urka ugu badan.
Cabir: D7cm * H9.3cm
Cabbirka: D11.2CM * H8.7CM
Weelka daasadda safarka ee khaaska ah shumacyo udgoon
1. Shumacyadan is haysta ayaa lagu shaabadeeyey muuqaal qurux badan, oo kugu habboon inaad ku wareejiso meel kasta oo aad tagtid!
2. Abuuritaanka jawiga kor u qaada jawiga iyo nasashada adiga iyo martida, sidoo kale waxay ka dhigeysaa hadiyadda ugu habboon munaasabad kasta!
3. Fadlan sii martidaada, asxaabtaada ama qoyskaaga gurigaaga daaweyn dareenka ah shumackan dabiiciga ah ee udgoon ee udgoon leh!
4. U kaxee iyaga kaamamka, xeebta, si ay ugu soo caweeyaan goobta baarkinka oo aad ugu raaxeysato waqtigaaga tayada leh qoysaska iyo asxaabta!
Cabbirka: 6.5 cm (Wareeg) * 4.5 cm (Dherer)
Shumac barafoobay oo shumac cadar ah oo leh suuf
Shumaca ayaa si qurux badan loogu soo koobay hibada! Waxay uraysaa qurux aad u dabiici ah.
Shumaca muraayaddan waa alaabtayada caanka ah, waa mid weyn oo gubasho wanaagsan leh.
Haddii aad dooneysid astaan ​​astaan ​​ah, adigaa noo soo dira oo annana waxaan kuu soo qaadaneynaa muunad.
Midab: Caddaan Madow 、 buluug, midab kasta oo aad jeceshahay
Udgoon: Lavender 、 Rose 、 Strawberry 、 Badhan iwm.
shumaca udugga caadada
Waxaan u heellannahay inaan u keenno raaxeysi, qaab iyo tayo macaamiisheena, oo leh khibrad 20 sano ah. Moodooyinka waqtiga-sharafta leh ee adduunka oo dhan waxay ku dhiirrigeliyaan naqshadeeyayaasheena inay abuuraan uruurinno gaar ah, kuwaas oo ay soo dhaweynayaan kuwa qiimaha doonka ah.
Tusaale: C01M / C03M
Cabbirka: 8.8cm (Width) * 8.8cm (Dherer), 9cm (Width) * 11cm (Dherer)